Elementary Os Luna, ugu dambeyntii xasilloon! Dib u eegid | Laga soo bilaabo Linux
Elementary Os Luna, ugu dambeyn xasilloon! Dib u eegid
dabogal 92 | | Qaybinta
Xiranayay Lubuntu maalmahan aad ayey u faraxsan yihiin, marka laga reebo khaladaadka qaar ee aan ku haystay dib u dejinta daaqadaha barnaamijka qaarkood.
Aakhirkii waan galayaa Google+ Aniguna waxaan xasuustaa ogeysiiskii ahaa inay u badan tahay inuu soo baxayo Dugsiga Hoose xasilloon Waxaan aadaa webka waxaanan horey u helay ISO. Waan soo dejinayaa oo waxaan ku tijaabinayaa CD toos ah.
Marka ugu horeysa waxaan kaheleynaa Desktop Environment, nadiif ah, qurux badan oo fudud, aadna ugu eg kan Mac OSX.
Illaa iyo hadda wax kasta oo fiican oo ku saabsan cd-ka tooska ah, illaa aad ka ogaato in qalabkaaga uusan si fiican u taageerin Kernel 3.2 iyo miiska 8, markaa waxaan bilaabay inaan rakibo qalabka 'distro' ka dibna isticmaal edorg xorg ppa si aad u hesho miiska ugu dambeeya, iyo Kernel 3.11 ka ppa ee Ubuntu Kernels.
Markii waxan oo dhan la qabtay, waxaan go'aansaday inaan bilaabo dib u eegista deegaanka talaabo talaabo, waxaan eegi doonaa mid kasta oo ka mid ah codsiyada.
4 Faylasha (Faylasha Phanteon):
6 Liiska codsiyada:
7 Nidaamka doorbidida:
8 Xarunta Software:
Barnaamijkan quruxda badan ee raadinaya, oo lagu dhiirrigeliyey iTunes. Waxay na siisaa noocyada caadiga ah ee daawashada 3, daboolida, qaabka liistada iyo "farshaxanada, noocyada, albamka".
Codsigu waa mid aad u fudud, wuxuu kaloo na siiyaa is waafajin la leh LastFM oo ilaa iyo hadda wax cusub ma aha Banshee, Rhythmbox, Clementine, Amarok, Audacious ...
Imtixaankeygii tijaabinta barnaamijka ayaa si qarsoodi ah u burburay labadii jeer ee ugu horreysay ee aan doonayay inaan dejiyo galka muusigga, markii saddexaadna waxay ahayd soo jiidashada.
Joogitaanka raadiyeyaasha, sida Shoutcast, Icecast, iyo sidoo kale qalab lagu ciyaaro oo loogu talagalay 'Empathy' ayaa maqan.
Marka hore in la dhaho runtii waan jeclahay qaabka toosan ee saxanka barnaamijka, waxay i xasuusisaa wax badan oo ka mid ah codsigii Mail ka Osx.
Waxaan si dhammaystiran u rakibey sawirrada emaylka Gmail, kuwaas oo aan si fiican uga shaqeyn KMail.
Dhibaatadu waxay tahay markii ay ka tagaan dadka wax yaqaan, waxay iloobeen wax aniga ii ah gebi ahaanba lagama maarmaan. Waxaan ka hadlayaa raadinta emayllada, raadinta erayada, waxyaabaha ku jira, maalmo, iwm. Runtii waa wax aan raaxo lahayn in la raadiyo fariin laga bilaabo sanadka 2012 adigoon haysan sanduuqa raadinta.
Mar labaad in la dhaho nooca Midori granite wuxuu umuuqdaa mid aad uwanaagsan, bad maaxiddu waa mid dheecaan leh mana aanan la kulmin xirnaansho lama filaan ah maadaama ay badanaa igu dhacdo aniga oo leh daalacayaasha ku saleysan qtwebkit.
Laakiin mar labaad, xitaa markaan raaco qoraal ka yimid wiilasha Dugsiga Hoose, ma aanan helin flash si aan uga shaqeeyo biraawsarkan (64-bit). Marka waxay ahayd hal Internet Explorer oo kaliya oo iga caawisay inaan soo dejiyo Chrome.
Faylasha (Faylasha Phanteon):
Runtii waan jeclaaday barnaamijkan, wuxuu sameeyaa waxa lagama maarmaanka ah, wuxuu leeyahay 3 nooc oo ah aragtiyaha caadiga ah, qaabka galka, liiska iwm. Waxay qabataa waxa kaliya ee lagama maarmaanka u ah adeegsadehu uma baahna, wax badan ama ka yar. Quruxdeeda waxay i xasuusineysaa waxyaabo badan oo ka mid ah maareeyaha faylka OS X, laakiin xaaladdan, anigoo aad u fudud.
Marka +1 ee barnaamijkan.
Xaaladdan oo kale, anigu ma bixin karo fikrad gaar ah, waligay ma isticmaalin noocyada noocan ah ee codsiyada ah, markaa illaa maantadan ma fahmin sida ay ii caawin karaan.
Guul aad u yar, marka loo eego Gnome Shell, maadaama aysan jirin sabab loo helo menu ka buuxa shaashadda oo dhan. Waxaan fursad u leenahay aragtida alifbeeto ahaan, iyo sidoo kale suurtagalnimada in lagu qoro noocyada codsiyada.
Ma jiraan wax badan oo laga sheego arrintan, waa nuqul ka mid ah isla barnaamijkii Ubuntu oo isagu markiisa ku salaysnaa isla OS X. Ficil ahaan isku mid, way fulisaa shaqadeeda waxa kaliya ee aan tebayna waa inay ii ogolaato inaan go'aansado in fayl lagu dhejiyo desktop-ka. Kaas oo aan ku xalilay Qalabka Gnome Tweak.
Waxaan u maleynayay inaan ugu dambeyntii isku arki doonno xarunta cusub ee ay ku dhawaaqeen, laakiin ugu dambeyntii waxaan imid isla xaruntii Ubuntu.
Dhameystirka muuqaalkan dusha sare, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa inay tahay mid fudud, nadiif ah, qurux badan oo qeybinaysa oo isku dayaysa inay qabato isticmaale bixinaya qaab aad u fara badan, laakiin taasi waxaa ku dhaca seddex waxyaalood oo aad u xanaaq badan:
Xirmooyinka xoogaa duug ah oo u baahan adeegsiga PPA, labadaba Kernel iyo MESA, iyo sidoo kale barnaamijyada aasaasiga ah ee 'Libreoffice'.
Libmutter 3.4 looma iftiimin sida 3.8, taas oo siinaysa waxoogaa ka hooseysa waxqabadka garaafka intii ay kari lahayd haddii ay ku salaysnaan lahayd wax cusub oo casri ah.
Codsiyada waa kuwo aad u fudud oo ka maqan waxyaabo ay dad badani aaminsan yihiin inay muhiim yihiin.
Xusuusin kama dambaysta ah:
Aad u yar in ka badan sannad iyo badh horumar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Elementary Os Luna, ugu dambeyn xasilloon! Dib u eegid
101 faallooyin, ka tag taada
Nacas! Waad iga hormartay 🙂
Si kastaba ha noqotee, Dib-u-eegistu waa mid aad u wanaagsan in dhadhan uun la helo. Waan kugu raacsanahay in waxyaabo aad u fudud ay dhibsadaan. Waxaad sheegaysaa Geary (taas oo habka ahaan ay u tahay wax laga xumaado in aysan lahayn taageerada POP3), laakiin isla waxbaa ku dhaca Maamulaha Faylka sidoo kale. Runtii waan u xiisay inaan awoodo inaan ka raadiyo dukumiintiyo iyo kuwa kale isla codsi, wixii intaa ka badan, ma xasuusto in eOS ay qalab u leedahay.
Kalandarka waa qabow yahay, laakiin dhibaato ayuu leeyahay (ugu yaraan markii iigu dambeysay ee aan isku dayo), kuuma soo ogeysiinayo dhacdooyinkaaga, markaa haddii aadan furin, waxna kama ogaatid.
Midori wali waxay haysaa wax aanan jeclayn. Mana aqaano qaabka xasilloon, laakiin Beta markii aan tijaabiyey, ma aanan jeclayn in wadahadallada qaabku ay yihiin ama leeyihiin qaab la mid ah kan GNOME.
Ka baxsan tan, waa qaybsi heer sare ah oo lagula taliyay dadka isticmaala cusub. Sideedaba, qiimeyntaadii ugu dambeysay waxay i siisay fikrad 😛
Fikradayda waxaa si wanaagsan loogu soo koobay xukunkii ugu dambeeyay Franchesco:
Aad ayey u yar tahay in ka badan sannad iyo badh horumar ah
Waxaan u hambalyeynayaa Kooxda Dugsiga Hoose laakiin marka la soo koobo, waxaan hore u ogaanay waxa meesha ka jira mana aanan la yaabin daah-furkan.
Waan yara niyad jabay ka dib aragtidii ugu horreysay, wax badan oo rajooyin ah ayaan ka qabtay 'distro', laakiin guud ahaan waxaan u jeclahay asxaabteyda / macaamiishayda aan waxba ka aqoon kombiyuutarada, sida ugu fudud ee fudud, sanduuqa furan ma noqon doono iyaga inkasta oo ay aniga ahaan lahayd. 🙂
Jawaab Javier Fernandez
Waa wax fudud, oo fudud, in ay jiraan "wax" maqan. Aniga ahaan waa faahfaahin yar, oo dhinac looga tagay, taas oo aan aniga ka dhigayn wax shaqaynaya. Laakiin runtii waan ka helay sharraxaaddeeda, laakiin sidaas oo ay tahay, ma shaqeynayo, sida haddii ay noqon karto Manjaro XFCE.
Waxa aniga aad ii dhibaya waa inaadan ku dari kareynin toobiyeyaasha kumbuyuutarrada, kaliya aad wax ka beddeli karto kuwa horay loo sii dejiyey.
Inta kale, waa wax fiican oo runti dhakhso leh, runtii, farxad marka la barbar dhigo Midnimada, Kde ama xitaa Xfce. Taas oo keli ah waxay mar horeba mudan tahay in la isticmaalo.
Sida codsiyada dhibaato badan ma leh, dhammaantood waa la rakibaa dhib la'aan.
Fudeyd, xawaare iyo qaab muuqaal oo aan isbarbar dhigi karin.
Jooji oo yareeyo badhanka!?
Way fiicantahay in mararka qaarkood aad ka yareyso astaanta gudiga laakiin haddii aad jiirka ku hayso shaashadda dusheeda waa jirdil, waa inaad hoos ugu sii socotaa jidka oo dhan si aad u yarayso daaqadda!?
Way qurux badan tahay, si fiican ayey isugu dhafan tahay oo qof walaashay ah oo mishiinka u adeegsada qaab aad u fudud wuu ku habboon yahay, laakiin waxaan ku harnay "gaajo": Maya (kalandarka) kama midaysnaayso Calendar Google ama adeeg kale. ... o_O Markaad xogtaada ku dhex hesho daruuraha siyaabo kala duwan, waa lama huraan in wax walba la iswaafajiyo (kiiskeyga taleefanka gacanta, laptop-ka guriga iyo desktop-ka shaqada), desktop-ka ma dhiman doono laakiin Daruuraha ayaa nolosheenna wax badan u fududeeya.
Waxay sidoo kale sii waddaa inay haysato isla dhibaatada Ubuntus / Debian: ahaanshaha sii deynta meertada ah waxaa ka buuxa barnaamijyo hore (GIMP 2.6? Kaalay dadka, waxaan isticmaalaa 2.8.1 aad u badan waxayna leedahay horumarin badan oo aan ka jirin Precise / GIMP) aasaasiga) Waxa Francesco ka sheegto PPAs waa si sax ah waxa iga fogeeyay Ubuntu, markii aad bilowdo inaad bedesho qaybo ka mid ah nidaamka waxay noqoneysaa mid aan degganeyn cusbooneysiintuna waa bakhtiyaanasiib.
elementaryOS waa mid aad u fiican, haa, laakiin fududeynta qaababka qaar ayaa si aad ah u sii dejiya.
Waan ku raacsanahay natiijada 6/10
Cudurdaarka badhanka Minimize ayaa ah in codsiyada loo maleynayo inay si dhakhso leh u furmaan oo u xirmaan furitaanka iyo xidhitaankuba waxay la mid yihiin yaraynta. Waa run inaad toos u yareyn karto astaamaha dekedda, laakiin kaalay ..
rakibi isbeddellada aasaasiga ah iyo daaweynta quduuska ah. waxaad kor u kacaysaa hal dhibic oo dheeri ah ...
Ugu jawaab nicot
Halkan waxaa kuugu yaal Xidhiidh si aad ugu darto badhanka yareynta.
Waxaan rajeynayaa inaysan ahayn spam.
cabdicasiis (@cabdicasiis) dijo
Kuwa tijaabinaya inay eegaan inay sii joogayaan qaybintaan, waxaan kugula talinayaa inay maraan: http://www.elementaryupdate.com/ halkaas oo aad ku rakibi karto aasaasiga bulshada ee 'PPA' kaas oo aad ku rakibi karto Elementary Tweak, Wingpanel Slim iyo mawduucyo kala duwan si aad ugu habeyso waxyaabo kale ...
Jawaab ku bixi pEpE (@valdezpepe)
Waad ku mahadsan tahay Webka, ma aanan ogeyn, waa in lagu dhejiyaa boostada lafteeda. Inta badhanka yareynta lagu daro.
Salaan iyo mahadsanid
qoraal aad u fiican waxay iga dhigeen inaan meel ku keydiyo darawalkayga adag. 🙂
way fiicnaan lahayd in dib loo eego solydxk qaabkeeda kde si weyn ayaa loo qadarin doonaa
Ku jawaab Richr
Waxaan xiriir adag la yeeshay dugsiga hoose, laga bilaabo jeclaantiisa iyo nacaybkiisa. Dhaleeceynteydu had iyo jeer waxay diiradda saareysaa la'aanta habeynta (astaamaha, mooska mawduucyada, mawduucyada GTK, iwm.) Sababtoo ah waxaan u maleynayaa, iyo waxyaabo kale, in Linux ay tahay waxa ku saabsan oo dhan: sameynta desktop-ka adiga iska leh; si kastaba ha noqotee, sharraxaadda taxaddarku waxay iga dhigeysaa inaan isticmaalo, in kasta oo distro-ku uu si cad ugu sii jeeday dadka isticmaala novice libaaxyada duugga ah ee ila midka ah
Hadda waxaan la soo dersay dhibaatada haddii aan isku dayo inaan rakibo skype, waxay dooneysaa inay tirtirto jawiga desktop oo dhan ...
Isticmaal DPKG (haddii ay ku jirto konsole, dabcan), oo markaa iska ilaali inaad u dirto desktop-ka oo dhan cadaabta.
Hagaag, waxaan ku rakibey dhibaato la'aan.
Anigana, kadib markii aan hagaajiyay sida xun ee keydadka u keyd u ahaayeen ilaha aan kahelay. Liiska .., sababa jira awgood ayaa bakhaarada ubuntu loo daabacay.
Runtu waxay ahayd inaan aad u faraxsanahay markaan arkay in eOS mar horaba lasii daayay, sidoo kale runtii waan jeclaaday inay si dhakhso leh dib u eegis ugu sameeyeen, hada, waxaan qabaa laba shaki:
1) Waa maxay nooca Ubuntu uu ku saleysan yahay?
2) Ubuntu aad baan u isticmaalaa (guriga iyo shaqada) .Ma kugula talinaysaa inaad Ubuntu u wareegto oo aad u wareegto eOS?
Salaan weyn, Patricio.
1- Ku saabsan nooca 12.04 🙂
2- Aniga ahaan haa.
1.- Waxaan uga sii fiicanahay inaan sii wado Wheezy oo aan isticmaalo Ubuntu Server.
2. - Waxay noqon kartaa inaan jiido Dugsiga Hoose ee Shell PPA oo markaa aan u daayo 'GNOME Fallback' inay nasato.
Waxyaabaha muuqda ayaa ah sida loogu guuleysto isku-darka qt-ka mawduuca aasaasiga ah, taasi way fiicneyd.
Ma jecli inay ku dhisan tahay gnome3, in kastoo ay umuuqato inay aad ugafiicantahay gnome3. Haddii ay ku saleysnaan lahaayeen kde karti leh way rakibi lahayd ... xd.
Xaakinka 8) dijo
Marka laga hadlayo Midori iyo Flash, waxaan jeclaan lahaa inaan ka faaloodo in ay tahay in lagu hawlgeliyo xulashooyinka Kordhinta.
Wixii aad ka faallooto, haddii aad rakibtay oo aadan ku arki karin fiidiyowyo ama dhaqdhaqaaqyo toos ah Midori, markaa waa sababta oo ah inaadan u calaamadin inay firfircoon tahay dookhyada.
Waxaan kugula talineynaa inaad siiso barowsarkan weyn isku day. Aad u fudud, fudud oo aad u dhakhso badan. 😉
Jawaab jEsuSdA 8)
Waa la calaamadeeyay oo waxaan raacay boostada http://www.elementaryupdate.com/2013/05/flash-in-midori-web-browser.html
Laakiin qalad ayaan helayaa mana shaqeynayo.
Waxaan si fiican ugu dhajin lahaa Iceweasel si aan uga fogaado dhibaatooyinka soo bandhiga fiidiyowyada HTML5.
Ku saleysan Lubuntu ??? Marka ma waxaad leedahay waxay ku saleysan tahay LXDE?
Hagaag gabi ahaanba waan ku kala duwanahay ... Elementary-ku kuma salaysna LXDE, runtiina wuxuu leeyahay Shell dusha sare ah Gnome 3.4 oo loo yaqaan "Pantheon" oo ay weheliso codsiyo taxane ah oo ay soo saareen horumariyeyaasha Elementary .. Laakiin wali waa Gnome 3.4 leh dhar cusub.
Waa hagaag haddii mid ka mid ah waxyaabihii i niyad jabiyay uu ahaa sida waqtigiisu u dhacay ee xirmooyinka ... kernel 3.2 a libreoffice 3.5 huy no no no ....
Xalka kaliya ee haray waa in la helo ppas si loo wanaajiyo, hadaba maxay tahay ujeedka loo isticmaalo ppas si loo isticmaalo kernel ama xirmo qaabkeedii ugu dambeeyay markii uu jiro Ubuntu 13.04 oo leh xirmada la cusbooneysiiyay?
Erayo kooban ... Dadku waxay u isticmaalaan aasaasiga muuqaalka ee farsamo ahaan, maxaa yeelay waxay umuuqataa wax lagu qoslo isticmaalka ppa si aad uhesho xirmo aad ubadan marka aad si fudud u rakibi karto Lu, Xu, Ku, Ubuntu 13.04 ama 13.10 (haddii aad bay u deg degtaa) oo ku raaxee adduunyada hadda jirta ee Linux
Elementary OS waa riyada ilmo kasta oo Linux ah…. in nidaamkaagu u egyahay sida ugu macquulsan ee Mountais Lion OS X
pufff ajajaj u sheeg kooxda heesaha dadka ku rakibay dariiqadan kaliya sababtoo ah muuqaal ahaan waxay u egtahay MAC
Hagaag, jaceylkeygii hore wuxuu jeclaa dib u dhaca GNOME 3 runtiina wuxuu u dhimanayay xaasidnimo anigoo garanaya sida fudud ee Debian GNOMe 3.4 uu ahaa.
Am ... wuxuu yiri wuxuu isticmaalaa Lubuntu distro ma ahan in eOS uu ku saleysan yahay Lubuntu
Waa run !! Ma aanan dareemin ... Si dhakhso leh ayaan u aqriyay waxaanan fahmay inuu dhahayo dugsiga hoose wuxuu ku saleysan yahay Lubuntu xD ahahahaha
raali ahow !!
Sababtoo ah Lubuntu (sidaan qabo) waa dhadhanka ugu xasilloon qoyska Ubuntu, ma jiraan wax dhibaato ah haba yaraatee
ok saamaxay ahahaha!
Ma akhriday maqaalka XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? Waxaan idhi waxaan isticmaali jiray lubuntu…, maahan in dugsiga hoose uu ku saleysan yahay lubuntu.
Sideedaba qofna ma adeegsado Wakiilka Isticmaalaha sidii hore….
Waxaan kaliya arkaa astaamaha faaruqa ah ee chrome oo leh Tux agtiisa xD
Ahaha aakhirkii dadku way ku daaleen sixitaanka wakiilka isticmaalaha XD
Haa, iyo dhamaadka maalinta kordhinta ay halkaas ku muujiyeen Chrome si fiican ayey u shaqeysaa, waxa kaliya ee xun ayaa ah in markaad furto Gmail uusan fureyn, marka waa inaad barkinta ka dhigtaa kordhinta si aad ugu soo gasho emaylkaaga account ahahahahaha
Waxaan door bidaa inaan sidan ahaado ...
In kasta oo ay tahay inay jirto ikhtiyaar kafiican halkaan oo aad si garaaf ahaan ah u dooran karto distro-ga aad rabto inaad ka muuqato wakiilka isticmaalaha
Maya, meelna kuma sheegin inay ku salaysnayd LXDE. Dhinaca kale Ubuntu 12.04 waa LTS oo siinaysa xoogaa xasillooni, runtiina waxaan u malaynayaa in baakadkeedu uu aad ugu egyahay kan hadda jira ee Wheezy, hase yeeshe xaqiiqadani nagama weecinayso inaan doonayno inaan rakibo xirmo cusub, iyadoo loo baahan yahay dartiis ama sababtuna tahay versionitis, Xaqiiqdu waxay tahay in taasi ay jirto ppas ama backports siday u kala horreeyaan, kuwaas oo ku siinaya xirmooyin cusub adigoon u hurin xasilloonida, gaar ahaan haddii aad leedahay jawi wax soo saar leh
Debian Wheezy wuu ka dabacsan yahay marka la eego xirmooyinka cusub (marka laga reebo ku rakibida Steam, dabcan).
Maqaal wanaagsan "
Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro in Sabayon 13.08 iyana la siidaayay
Waxay ku timaaddaa kernel 3.10.4, GNOME 3.8.4, KDE 4.10.5, MATE 1.6.2, Xfce 4.10, LibreOffice 4.1, nidaam ahaan asal ahaan bilow ahaan, hagaajinta UEFIBoot, iwm.
Macmiilka boosta ayaa i xasuusinaya Thunderbird oo kaliya hehehe ka fudud
Sidee ku bedeli kari weyday qadarka tarjumaadda Terminal adigoon soo marin elementaryupdate.com!?
Waan ku fiicanahay bixinta wareejinta qaaska ah, laakiin _ qaadashada awooda u qaabeynta nidaamka_ ee adeegsadayaasha horumarsan waa iska caabin.
shimbir madow dijo
Waxaan u maleynayaa in Xfce uu ka dheereeyo kana jilicsan yahay Dugsiga Hoose, ugu yaraan Manjaro iyo Debian oo ah tan aan isticmaalo. Waxay ila tahay aniga in distoorkani keeno naqshad iyo wax kale oo aad u yar. Midka aan kula talin lahaa isticmaaleyaasha cusub waa Voyager = http://voyager.legtux.org/ , oo ku saleysan Xubuntu, marka laga reebo inuu aad u qurux badan yahay, waa mid aad u faa'iido badan oo shaqeynaya, taas oo aasaasiga ah aniga ilama muuqato.
Dareenka ay i siisay ayaa ah inay la mid tahay wax soo saar warshadeed, oo aad u baakadaysan oo soo jiidasho leh, laakiin markaa aad looga xumaado isticmaalka.
Sidaan ku idhi qoraallada kale, waxaan siin doonaa nidaamkan fursad, waxay u egtahay qurux iyo taxaddar badan qaab muuqaalkeeda ah.Waxaan tirtiri doonaa Linux Mint 15 waxaanan rakibi doonaa aasaasiga os.
Ku jawaab aioria
distro si loo soo bandhigo sheeko sheeko sida Linux quruxsan ay u eegi karto aayad
Ku jawaab Irvandoval
Waxaan u maleynayaa waxa kaliya ee ElementaryOS ka maqan yahay inuu noqdo nuqul OSX ah sidii Eebbe ugu talo galay waa aaladda toolbar ee guddiga sare
Su’aasha, aragtidayda waxay tahay ... maxay ugu baahan tahay nuqul? Miyaanay GNU / Linux ahayn mid la beddeli karo oo is-waafajin ku filan si loo abuuro qaybinta shakhsiyaddaada?
Jawaabtu waa mid aad ufudud, dad badan ayaa jeclahay (aniga sidoo kale), tufaaxa look
Haa, dabcan, taasi waa shaki la’aan. Waxaan sidoo kale jeclahay waxyaabo ku saabsan muuqaalka Mac, qaarna ma jecla. Sida aan jeclahay faahfaahinta qaar ee Win7, iyo kuwa kaleba ma jecla.
Xaqiiqdu waxay tahay, inta udhaxeysa "hawo", ama dhiirigelin uu siinayo Mac, nuqul noqoshaduna waxay mareysaa waddo dheer. Ahaanshaha nuqul ka mid ah wax horey loo qabtay, aniga oo aan waxba ku darsan, waxay ila tahay aniga hal abuur la'aan aad u weyn.
Arrinta distro-kan, waa tan ugu dhow waxa kaliya ee wax ku biiriya ayaa ah, naqshadeynta, wax kasta oo kale, in yar oo run ah.
Ma xuma sidoo kale, muuqaalka muuqaalka eOS wuxuu siinayaa hawo MAC OS X ah, laakiin way ka fogtahay mid lamid ah.
Baarka sare waxba kuma laha, sidoo kale astaamuhu ma qabtaan, weynaadaan, astaamaha dhow, si fiican, waan sii wadi karaa mana dhamayn karo.
Ku jawaab Kirl
Hal abuur badan waxay abuuri lahaayeen jawi desktop ah (sida Gnome, oo wata barnaamijyadooda iyo wixii la mid ah), natiijaduna way ka sii fiicnaan lahayd.
Waad xasilloonaan lahayd 2017 xD
Dugsiga Hoose wuxuu leeyahay codsiyo u gaar ah: Buuq, Pantheon-Files, Scratch, Maya, Pantheon-Terminal iyo kuwa kale, oo lagu daray Midori iyo Geary waxay ku xiran yihiin kooxda Elementary, marka muuqaal ahaan ma ahan oo keliya laakiin runti wax badan ayey gelinayaan.
Runta ayaa ah, mana aanan horey u dhihin, waa inaan ka xishoodo in disto ama shell uusan la imaan 3-da badhan ee daaqadaha maxaa ogolaansho ama amar anshaxeed leh kuwaan Elementary ama Gnome Shell ay ka saareen?
Mac OS X, Windows, KDE, Xfce, Cinnamon iwm miyaysan wali haysan 3 badhan daaqadaha?
Ma jiraan wax intaas dhaafsiisan, oo aanan ku jirin 3da badhan sida caadiga ah, mar dambe ma doonayo Elementary ama Gnome Shell, hana ii sheegin inay kuuskuus ku dhacayso, waan ogahay, waxa aan leeyahay waa inaadan waa inay ka qaadaan.
Waxaan ku iri.
Xitaa GNOME 3.4 Soo-celinta waxay leedahay saddex badhan. Waa maxay caajisnimada tan ee Elemantary OS Developers.
Puff haa !! Aadida Tweaks iyo xulashada qaabeynta badhanka ayaa waqti badan qaadanaya….
Maaha qof walba ... kuwan hoose waa waalan yihiin!
Charlie E Liarson dijo
Xitaa cilladaha codsiyada, nidaamku wuxuu ila muuqdaa mid igu habboon, waan ku faraxsanahay. Cayayaanka iyo faahfaahin la'aanta ku jirta codsiyada, waxaan u arkaa inay dhiirigelin u tahay barnaamijyada. Runtii waxaan u arkaa inay tahay miiska ugu fiican kombuyuutarrada gacanta iyo guriga, shaqaduna ma xuma haba yaraatee. Waa xasiloon yahay, dhakhso leh, fudud, iftiin, nadiif ah oo qurux badan. Waxaan u maleynayaa inaan aad ugu farxi doono Elementary OS inta sanadka ka hartay iyo ilaa 2014.
Jawaab Charlie E. Liarson
Sida iska cad, ma jeclaan karo qof walba. Waxay ila tahay aniga dadaal ah in loo sacbiyo: in la helo desktop ay go aansadeen inta badan waa iska fududahay, laakiin qaybinta oo loogu talagay isticmaalaha "caadiga ah" ayaa ka badan inta ku filan. Waxaa jira wax lagu sifeeyo, laakiin iyagu waxay gaareen qaabkoodii u gaarka ahaa .. maxaa qeybinaya, marka laga reebo Ubuntu, oo isla sidaas dhihi kara?. Cilladdu waxay tahay inay ka bilaabeen guriga saqafka, si macquul ah ugu tiirsanaanta aasaas yar oo Ubuntu hore u jirtay (haddii ay la soo bixi lahayd mid la mid ah tan, ma aha wax la canaanan karo). Muhiimadu waa in waxa ugu adag la qabto. Hadda kaliya isticmaaleyaashu waa la la'yahay (waxay noqon doontaa mid ka mid ah talooyinka ka jira deegaankeyga) iyo in la nadiifiyo oo la hagaajiyo waxyaabaha. Waxaa laga yaabaa in mustaqbalka aan fogayn ay ku saleysnaan karto Arch ama Debian Testing. Waxaan u maleynayaa inay u ciyaareen si nabadgelyo ah oo ku saleysan nooca Ubuntu. Nasiib
Dhinaceyga, haddii ay jiri lahaayeen nooc ka mid ah ku-beddelka degdegga ah ee loogu beddelayo Gnome Shell saafi ah si aan ugu habboonaado, waan u isticmaali lahaa hubaal. Mustaqbalka ayaa sheegi doona, laakiin maaha dhulka. Qalabka Gnome 3 ee cusub ayaa ka xoog badan.
Aniga ahaan dadaalka qaybinta si loo gaaro jawi isku dhafan oo isku dhafan waa inuu noqdaa aasaasi. In mid kasta oo ka mid ah astaamaha nidaamka iyo codsiyada u dhigma oo uusan isku dhicin oo dhammaantood ku yaal boggaaga waa odyssey ay tahay in isticmaaluhu ka shaqeeyo. Mana aha inay sidaas noqoto. Taasi waa sababta aan u jeclahay Gnome, maxaa yeelay waxay ila muuqataa inay tahay mida sida ugu fiican u oggolaanaysa iyo inta aan jidka ku sii jiro, oo ay la socdaan taxanayaal codsiyo dhammaantood isku dhafan…. taasina waa sababta aan ugu khamaari lahaa khamaarigayga. Ma aqaano adiga…. laakiin way i dhibaysaa taas, si kasta oo ay u fiican tahay xirmada astaanta ahi, waxaad had iyo jeer heshaa qof heesaya…. ama indha indheynta caloosha distro si loo helo astaamo ka yimid nooc kale oo nooc ka dib markii la beddelay. Xitaa Windows-ku ma daryeelo tan. Barta tayada Apple.
«Aniga ahaan dadaalka qaybinta si loo gaaro jawi isku dhafan oo isku dhafan waa inuu noqdaa aasaasi. In mid kasta oo ka mid ah astaamaha nidaamka iyo codsiyada ay iswaafajiyaan oo uusan isku dhicin oo dhammaantood meeshooda ay ku yaalliin waa odyssey ay tahay in isticmaaluhu ka shaqeeyo. »
Waan ku raacsanahay, waa mid ka mid ah sababaha marwalba igu khiyaaneeya GNU + Linux distros, oo ay soo saareen koodhadhku ma daneeyaan ukun sida ay u eg yihiin, dhinacan iyo isdhexgalka codsiyada (Granite, iwm) ) waa halka qaybinta runti ka ifayso.
Ilaa iyo inta ay ku sameynayaan Arch ama Debian muhiim maahan, haddii aanan ku qaldamin Arch _waxay runtii rabaan desktop-ka hoose-dhexe iyo waxa kaliya ee ay sugayeen inay gabi ahaanba keenaan waxay ahayd inay gaarto xaaladdeeda deggan, I ma ogi sida ay yeeli doonaan wax ka qabashada ku tiirsanaanta GTK3 ee noocyo kala geddisan laakiin haddii ay ka shaqeyn karaan waa hadaf weyn 😀
Waan jeclahay dadaalka. Waxay isku dayaan inay ka soocaan "ganacsiga sida caadiga ah" Linux distros, laakiin waxaa iska cad inay iyagu ka naqshadeysan yihiin kuwa wax barta.
Aad u fiican, in kasta oo aanu dhaafin gNewSense gabow, in noockeedii ugu dambeeyay uu ku saleysan yahay Debian Squeeze.
Si la mid ah, waa qolofka ugu ballaaran uguna quruxda badan ee aan ilaa hadda arkay, in kasta oo aan doorto inaan sii wado isticmaalka dib u dhaca GNOME 3.4 ee aan ku haysto Wheezy.
Taasi waxba ma ahan. Nautilus-ka ka socda GNOME 3.8 / 3.10 waa midka aan aad u necbahay, maaddaama aanan adeegsan karin baanka cuntada ee ii oggolaanaya inaan aado xulashooyin horumarsan.
Badhanka 3, waxaan si kal iyo laab ah kuu taageerayaa.
Weligay maan jeclaan distoorkan, laakiin wali waxaan u rajaynayaa nasiib waxaanan rajaynayaa inay dadka u soo dhowaato dunida Linux iyo sidoo kale Ubuntu.
Guys, aniga, haddii aan daacad ahay, ra'yigeyga Elementary OS Luna, waa wixii aan ka filayay Ubuntu 10.04 ... halkii laga heli lahaa Midnimada. Midnimo, kani waa mid aad u wanaagsan ... haddii aad haysato kombuyuutar fiican, awood leh oo casri ah ... laakiin haddii kombiyuutarkaagu yahay mid dhexdhexaad ah ama hooseeya gamma, pf ... wax faallo ah ma leh.
Kuwo badan ayaa ka cabanaya sida waqtigoodu u dhacay ee barnaamijyadooda loogu daray ay yihiin, laakiin haddii aan barbar dhigno gNewSense, qaar badan ayaa ka laaban doona wixii la yiri tan iyo markii nooca cusub ee distoorku uu ku saleysan yahay Debian Squeeze, marka taasi waxba ma aha.
Deegaanka laftiisa waa mid xasilloon.
Waxa guud ahaan fashilmay waa codsiyada qaar. Faylasha fayrasku wali wax yar baa ka dhiman (in kasta oo ay wax badan soo hagaagtay).
Ugu yaraan biraawsarka feylashu wuxuu leeyahay xoogaa alaab ka badan tan hadda jirta ee GNOME 3.10 Nautilus.
Laakiin Nautilus ma qaadi karaa alaab yar? Gnome 3.8 waa inaan ku beddelaa Nemo maxaa yeelay waxba lagama qaban karo.
Sida Elementary, waa mid aad u qurux badan oo fudud laakiin si loo isticmaalo waxaan ku rakibaa Ubuntu ama noocyo kala duwan oo waxaan ku helayaa saameyn isku mid ah adoo beddelaya noocyada, astaamaha, dulucda iyo dekedda
Ku jawaab si aad u geliso
Ma aqaano, waxaan doorbidaa carro badan oo badan inaan sameeyo .., sababtaas darteed anigu ma rakibo ubuntu.
Waxaan isticmaalaa dib u soo celinta GNOME 3.4 oo iigu timid Debian Wheezy, Nautilus-na wali waa faa iido.
Waxaan u maleynayaa in muuqaalka noocaan ah 'distros', oo inta badan diirada lagu saaray "khibrada isticmaale" (hoose, chakra, iwm) waxay muujineysaa in salka (kernel, maktabadaha, iwm.) Ee Gnu / Linux ay si ku filan ugu horumarsan yihiin qaar ka mid ah inay noqdaan Dedicate kaliya "dusha sare", waxaan u arkaa inay tahay calaamad aad u wanaagsan, nidaamka deegaanka wuxuu ku jiraa caafimaad aad u wanaagsan. Salaan.
Cadee arrimaha qaarkood ee soo baxay:
- Qaybinta ayaa ka aasaasisan waxa ay horumariyayaashu rabaan, laakiin waxay ka wanaagsan tahay in yar lagu bilaabo oo la koriyo intii la isku dayi lahaa in la horumariyo shirkad weyn oo aan waligeed la dhammayn. - Iyadoo la tixgelinayo maqaalka, Geary barnaamijka boostada waxaa soo saaray Yorba, mana ahan horumariyeyaasha Elementary. Raadinta waxaa loo qorsheeyay nooca xiga ee barnaamijka, laakiin waxay ku socdaan xawaare u gaar ah.
- Horumariyayaashu way ogyihiin in maktabadaha ay duug yihiin, ma qarinayaan inay jecelyihiin Arch oo qaarkoodna waxay wax ku darsadaan Arch.
-Hadda waxaa si weyn loogu dhaliilay fudeyd, laakiin waa saldhig, kan soo socda ayaa ka sii fiicnaan doona oo sannad ama laba sano gudahood Ubuntu way gariiri doontaa.
Xiiso Leh Ma jeceshahay qaansada? Sidee fiicnaan laheyd haddii ay a Dugsiga Hoose sida Manjaro, taasi waa, ku saabsan halka laakin rakibo sahlan iyo kuwa kale 😀
Dhammaantiin, ereyo gaar ah oo ka yimid reer Debian oo iftiinka arkay, walaal! xD
Waxaan sameynayaa rinjiyeynta weedhaas aad leedahay 😀
Haddii horumariyayaasha Arch ay sameeyaan rakibayaal qaab-qaabeed ah sida OpenBSD, waxay noqon lahayd sabab badan oo loo rakibo Arch. Waqtigan xaadirka ah, weli waxaan tijaabinayaa mishiinka casriga ah.
Isticmaal tan oo tag:
waxay ku socdaan xawaare u gaar ah
Kuma doodi doono taas ..., at a snail rate xD
Sannad ama laba sanadood oo ubunut gariiraa ..., runta, xitaa iyadoon la isticmaalin ubuntu oo la arko in ubuntu u jiheysto dhanka mir iyo midnimada cusub, waxaan ka shakisanahay in distoorkan uu dhaafi karo ubuntu, waxay noqon doontaa mid kale oo qurux badan oo Linux ah laakiin wax intaa dhaafsiisan.
Waxaan istcimaalay 4 maalmood ilaa iyo hada waxkastaba sifiican ayey ushaqeynayaan. Waan u xiisay oo sida aan ogahay wadayaasha lahaanshuhu waa inay ka shaqeeyaan si ka wanaagsan kuwa bilaashka ah laakiin tan qalqal galinta tan ka soo horjeedka taasna way i farxad gelisaa 🙂
Waxay igu dhacdaa si la mid ah adiga, darawalada lahaanshaha ayaa ii dhinta, dhanka kale kuwa bilaashka ah waa ganaax ganaax.
«Marka ugu horreysa waxaan helnaa Degaan-bixiye (Desktop Environment), nadiif ah, qurux badan oo fudud, aadna ugu eg kan Mac OSX.
Illaa iyo hadda wax kasta oo wanaagsan oo ku saabsan cd-ka tooska ah, illaa aad ka ogaato in qalabkaaga uusan si fiican u taageerin Kernel 3.2 iyo miiska 8, markaa waxaan bilaabay inaan rakibo mashiinka 'distro' ka dibna u adeegsado xorg edgers ppa si loo helo miiska ugu dambeeya, iyo Kernel 3.11 Ubuntu Kernels ppa. »
Codso 2daas talaabo ee fudud natiijaduna waa mid layaableh ... nidaamku wuu duulayaa ... DIIROOYINKA ... dabcan, waxaan sameeyay xoogaa hagaajin ah, waxaan ka saaray saamaynta qaar, iwm ...
Waxaan ka shaqeynayay Debian in ka badan 5 sano (marwalba midka xasilloon), laakiin laptop-ka waxaan ku socday kalabar gaabis ah (gnome shell) sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan isku dayo si aan u arko sida ay u dhaqmayso runtiina waan jeclahay a wax badan, labadaba xawaaraha, sida iftiinku u yahay iyo sida taxaddar u dhex-dhexaadku yahay. Hadda ku rakib kombuyuutarka, aan aragno inuu dhammaad yahay.
PS: waxa aanan heli karin waa sida wax looga beddelo menu-yada Codsiyada, sida in la tirtiro ama la beddelo qayb barnaamij ah, haddii qof ogyahay….
Xaaladdayda, uma baahnin inaan beddelo kernel ama fiidiyoow, in kasta oo aan isku dayi karo cusbooneysiintooda si aan u arko waxa dhaca.
Hadda waxa aan u arko inay muhiim u tahay isticmaalka maalin kasta waa inaan ku daro PPA-yada:
j: 0 ~> ls /etc/apt/sources.list.d/
birdie-team-xasilloon-saxan.list elementary.list. badbaadi loneowais-fogger-precise.list patches.list.save versable-elementary-update-precise.list.save
birdie-team-stable-precise.list. badbaadi erasmo-marin-sawir-maalinle-dhiska-saxan.Looteowais-fogger-precise.list.save sgringwe-rdio-precise.list webupd8team-tribler-saxda.list
caffeine-developers-ppa-precise.list erasmo-marin-foto-daily-builds-precise.list.save nilarimogard-webupd8-precise.list sgringwe-rdio-precise.list.save webupd8team-tesomer-precise.list.save
caffeine-developers-ppa-precise.list.save google-chrome.list nilarimogard-webupd8-precise.list. badbaadi shnatsel-dnscrypt-precise.list webupd8team-y-ppa-manager-precise.list
cassou-emacs-precise.list google-chrome.list.save nuvola-player-builders-deggan-xasilloon-saxsan.list tombeckmann-ppa-precise.list webupd8team-y-ppa-manager-precise.list.save
cassou-emacs-precise.list.save inkscape_dev-deggan-saxan.list nuvola-player-builders-stable-precise.list.save tombeckmann-ppa-precise.list.save
dkotrada-pomidor-saxda.list inkscape_dev-stable-precise.list. badbaadi otto-kesselgulasch-gimp-precise.list gudbintaBt-ppa-saxda.list
dkotrada-pomidor-precise.list. badbaadi libreoffice-libreoffice-4-1-saxan.list otto-kesselgulasch-gimp-precise.list.save broadcastbt-ppa-precise.list.save
hoose.list libreoffice-libreoffice-4-1-precise.list.save patches.list qaabab-cusbooneysi-hoose-dhexe-saxsan.list
Taas iyo dhammaan eOS ma lahan muuqaal sawir qaade ah waana inaan ku rakibaa Gwenview - nuugayo…
Waxa ugu horeeya ee aan qabtay markii aan rakibey waa inaan ka saaro barnaamijyada ay ku timid asal ahaan oo aan dhigo vlc, chrome, synaptic, thunderbird, dolphin iyo Libreoffice 4 runtiina waa inaan ka qanacsanahay
Waxyaabaha badan dhexdooda, waxaa ka maqan maareeyaha daaqada oo u oggolaanaya in la xasuusto booskii iyo cabirkii hore ee daaqadaha kala duwan ee codsiyada furan.
Waxaan ku celinayaa: ma jiro daawade fayl oo kuu oggolaanaya inaad beddesho feylasha garaafka, tan waa inaad u isticmaashaa GIMP, oo u dhiganta dilka duqsiga dubbe.
Beddelka kale waa in la isticmaalo qadka amarka (imagemagik, iwm.) Laakiin dabcan, waxay si toos ah uga soo horjeedaa falsafadda isticmaalka iyo bartilmaameedka isticmaalayaasha eOS.
Faylasha waxay u egyihiin sida Alpha oo kale marka loo eego cagaarka iyo, daacadnimada oo dhan, Dolphin waxay muujineysaa awooddeeda buuxda marka loo adeegsado isdhexgalka Nepomuk - in kasta oo iyada oo aan la helin isdhexgalka noocan oo kale ah ay wali tahay maamulaha faylka garaafka ah ee ugu fiican barxad kasta.
Dhibaato kale oo asal ah oo ka timaada GNOME ama maareeyaha daaqada eOS: markaan ku darno calaamadeynta Chrome / Chromium, maadaama nidaamku uusan xasuusnayn cabirka daaqadaha, waa inaad gacanta ku ballaadhisaa daaqada calaamadaha calaamadaha markasta.
Dhegeystayaasha: ujeedadeedu waa in lagu beddelo Totem oo leh isku xirnaan nadiif ah laakiin xitaa ma lahan xitaa shan meelood meel ka mid ah shaqadeeda - mar kale kordhinta shaqadu waxay ka soo horjeedaa.
Habka KDE SC waa mid aan macquul aheyn oo ficil ah: «waxaan ku siineynaa trillion fursado (ok, laga yaabee inaysan badneyn), waxaad uqeebeysaa isku xirnaanta sidaad rabto» si haddii qof uu doorbido isdhexgalka ugu hooseeya ay uheli karaan iyadoon laga lumin awooda arjiga, eOS waxay si toos ah uga saaraan astaamaha 'fudayd' fududeynta - ma ahan wax aan caadi aheyn Tweaks inuu yimaado si uu u xalliyo qaar ka mid ah cilladahaas.
Tusaalaha fududeynta ayaa ah Shotwell: wuxuu u shaqeeyaa sidii muuqaalka feylka asalka u ah asalka, wuxuu leeyahay tan badan oo ikhtiyaarro qalafsan laakiin ma ahan midka sawirka wax laga beddalayo - Yorba, way nuugaan !!!
Terminalka Pantheon: Terminal-ka la fududeeyay. Maxaad dib ugu cusbooneysiineysaa giraangirta markaad hubaal isticmaali karto GNOME ama Xfce? Intaas waxaa sii dheer, ahaanshaha horumar cusub suurtagal ma ahan in si fudud loo beddelo midabada, heerka hufnaanta ama awood u lahaanshaha in loo kala qeybiyo shaashadda dhowr terminaal sida Yakuake ama Terminator.
Haa, midabada waa la beddeli karaa iyadoo la adeegsanayo dconf si ka yar doqonnimada: https://gist.github.com/davidgomes/5162998
Fikradda eOS waa mid xiiso leh, nidaamku si wax ku ool ah ayuu u fududahay taasna waxay soo jiidanaysaa dareen badan oo ku saleysan Ubuntu, waxay leedahay fikrado wanaagsan (Wingpanel, Gazette) laakiin wali waxay u baahan tahay qaan gaar iyo in badan waxay dhahaan waxaa loogu talagalay non - isticmaalayaasha kombiyuutarka.
Xaaladdayda, sida muuqaal daawade, waxaan u isticmaalaa gthumb, waxaan wax ka beddelay hufnaanta terminalka laga bilaabo dconf, aasaasiga 'Tweaks' waligay igama shaqeyn, waxaa laga yaabaa inaan ka fogeeyay Faylasha 'Pantheon Files', oo ah wax aanan ahayn, runta ayaa ah, aniga uma baahnid xilligan tan iyo taabashada feylasha kale wax walbana waa sidaan jeclahay
ciise jimenez dijo
waad salaaman tihiin asxaabta, waxaan ku bilaabay linux fedora 14 distro waxaanan sii joogay ilaa 17 wixii markaa ka dambeeyay dhibaatooyin badan ayaan ku qabay kaarkayga sawirada iyo gaabis badan, intaas ka dib waxaan go'aansaday inaan isku dayo ubuntu iyo maya, waa qalad, waxaan si fiican u dhaqaajiyaa daaqadaha 7. Hadda waxaan ku soo laabanayaa Linux oo leh fedora 19 iyo maya, saameyntu aad ayey u gaabinayaan taasna way i saameyneysaa, dhibaatooyinka daabacaha oo dhowr jeer isku day rakibo ka dib aan daabici karo. Waxaan aadayaa Ubuntu 13.04 oo si dhakhso leh ayey u socotaa waana jeclahay laakiin daawashada fiidiyowyada waxaan ku arkaa distro Elementary os luna, waxay ku jirtay beta iyo maalintii aan soo dejiyey, oo ahayd waaberigii, horeba way u degganayd. Waan rakibay kumana siinayso dhibaatooyinka kaararka garaafyada, way fududahay in la rakibo adobe flash player waxaanan arkay in biraawsarka midori ee 64 qaybood ah aanu u shaqaynayn daawashada fiidiyowyada iminkana waan jeclahay, waan daawadaa fiidyowyada, waxaan u habeeyaa nidaamka, shaqooyin baan qabtaa wax walbana waa dhakhso badan, ma dhihi doono waa sida ugu fiican, laakiin OS wali wax badan baa ka dhiman laakiin hada si fiican ayaan u qabanayaa. Waxaan rajeynayaa oo aan hagaajinayaa, salaan asxaabta.
Jawab ciise jimenez
Waad salaaman tahay, waxaan ku rakibay dugsiga hoose oo aad ayaan ugu qanacsanahay, laakiin qof ayaa ii sharixi kara sida loo daro ppa si loo cusbooneysiiyo kernel
salaan iyo mahad
Maaha ppa, haddii ay tahay inaad tagto kuntarka guud ee ubuntu, raadso qaybta maalinlaha ah, oo soo dejiso faylasha faylasha madaxyada guud, amd64 iyo kernel gener iwm ka dibna ku rakib 1 1
Aniga, isticmaale dhammaad ah ... cusub oo ku saabsan Linux, waxaan si fudud u dhahaa ... waxaan si qoto dheer ugu mahadcelinayaa dadaalka weyn, waqtiga iyo u heellan ee ay dadku jecel yihiin ragga ka soo jeeda tan iyo wixii distro ah ay ku qaataan laga yaabee iyadoon wax magdhow lacageed ah la helin, iyagoo isku dayaya inay wax ka dhigaan Linux. soo jiidasho leh oo shaqeynaya dadka caadiga ah ... laakiin sidoo kale waxaan arkaa inta qof ee dhaliisha iyo LOW shaqadooda; halkii aad MAHAD siin lahayd oo aad iftiimin lahayd waxyaalaha badan ee wanaagsan ee Nidaamyadoodu leeyihiin, ee ugu dambaynta, sida 95% ama ka badan, ama laga yaabee inaanay jirin cid awood u leh inay soo saarto biilal yar oo ay uga qayb qaadato dadaallada noocan ah ... iyo sida aan Bilowga ayaa iri Xitaa aragtidayda laylisyada ah ee Linux iyo dhammaan jahliga ku saabsan mowduuca, waxaan dhihi karaa oo keliya «Sidee buu u qurux badan yahay Dugsiga Hoose! Midkii ugu dambeeyay ee ka socda Manjaro waa mid cajiib ah !!, »qorfe aad ugu raaxeysan leh Linux Mint !! Debian waa Debian !!! disto aan jeclahay !! ama waxa qof kastaa ka dhihi karo duruuskooda ... halkii aad ka qaylin lahayd sida dhallaanka ama aad uga caban lahayd xirfadda xun ee raadinta cilladaha !! hadday ahaan lahayd dhaliil wax dhisaysa markaa soo dhawow dhammaan! laakiin sida ay u fiicnaan laheyd in laga caawiyo dadkan midkood koodhka hagaajinta wax soo saarka ama iwm ... Markay maalintaas timaaddo waxaan u maleynayaa in Linux ay noqon laheyd, iyadoon loo eegin tirada kala-baxayaasha, nidaamka qalliinka ee ay kaamil ka tahay beeshu .. Tani waa faaladayda ku saabsan.
Ku soo jawaab MaikO
Ma jirin hal habar diirad oo ka shaqeysay buugyarahayga, qaar baa rakibi lahaa laakiin dib u bilaabid / xirid ka dib bay'adda garaafka ayaa tagi doonta, argagax badan oo kernel ah, kuwa kalena xitaa ma aanan bilaabi karin. Dugsiga hoose wuxuu ahaa ka soo horjeedka, wax walba waxay shaqeeyeen markii ugu horreysay, aad bay u deggan yihiin waadna la shaqeyn kartaa. Waxaan rakibay netbeans, geany, gdebi, virtualbox, chromium, libreoffice waxaanan u maleynayay inay tani jebin doonto rakibida, laakiin maya. Wax walba sidii ay ahayd.
Waad salaaman tahay, waan rakibey waana jeclahay, xarrago, fudeyd, deg deg ah, waxa kaliya ee "xun" waa in la rakibo dhammaan codsiyada aad u baahan tahay, iyo wax haddii ay wax yar igu dhibto, tahay inaad ku xirto pendrive ama dibedda diskka adoo adeegsanaya USB-ga oo uusan si otomaatig ah kor ugu qaadin, haddii kale si qumman ayuu u shaqeeyaa, ahhh iyo waxay ahayd inaan sameeyo cusbooneysiin gacanta ah si ay u ogaato taleefankayga
Waan jeclahay tan Waxaan hayaa xubuntu + qormooyin isugeyn ah, LMDE kale oo markaan adeegsanayo eOs runtii waxaan dareemayaa in mashiinku duulayo. Aad ayey waxtar u leedahay markaad u baahato inaad shaqeyso oo aad dhaqso wax u qabato. Dabcan way ka maqantahay waxyaabo qofku seego, laakiin waxaan rajaynayaa in iyadoo qof walba la taageero, mashruucan uu kori doono, sidaan qabo, distoorka ugu wanaagsan ee aan ku tijaabiyay marka la eego waxqabadka Buuggayga xusuusta (TM2, i3, 4MBRAM)
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Marka hore, waad ku mahadsan tahay boggan ballaariyay aragtidayda ku saabsan Elementary OS Luna. Marwalba waxaan ahaa isticmaale buuxa oo daaqadaha ah tan iyo markii aan la shaqeynayay softiweer aqoonyahanno ah taas oo laga yaabo aqoon la'aan ama diidmo in la beddelo ama xaqiiqda ujeeddada awgeed, waxaan u maleeyay inay ii keenayaan xaddidaadyo markaan shaqeynayo. Si kastaba ha noqotee, waxaan ahay qof jecel goob shaqo oo raaxo leh maxaa yeelay markaan furo PC-ga, oo noqon lahaa bilowga shaqadayda, waxaan qabaa fikirka ah in waxa ugu horreeya ee aan ku arko indhahayga hortooda ay tahay inuu abuuro kalgacal wacan oo ku saabsan aragtida iyo niyadda. Wixii aan halkaan ka aqriyay, Elementary OS Luna wuxuu noqon lahaa sida ilaah wax ku saabsan oo waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo. Waxaan shaki ka qabaa sida loo maareeyo wadayaasha kombuyuutarka markii la rakibayo OS-ga tan iyo markii aan arkay in cidina taaban mawduuca. Haddii qof iga caawin karo arrintan ama wax kasta oo kale oo la xiriira mawduuca, aad ayaan ugu faraxsanaan lahaa arrintaas. Xusuusnow in aanan waligey ka shaqeyn adduunka GNU / Linux iyo inaan doonayo inaan u qaato Elementary OS Luna sidii xariiq bilow ah.
Samba: Server kaligiis taagan oo Debian ah
Ku rakibidda TLP Arch Linux